Nwoke na Nwanyị na Nwa - Okwu Okwu • Mụta maka gị
site n'aka Harold W. Percival
Nkowa di nkpa
Akwụkwọ a pụrụ iche, nke e dere naanị ya, mepee vistas n'ime ubi ndị a zoro ezo na nzuzo ruo ọtụtụ narị afọ. N'ebe a, ị ga-amata na nzọụkwụ mbụ maka ịmaliteghachi ime mmụọ bụ ịghọta ọdịdị ụmụ mmadụ na-anwụ anwụ na ọnwụ. N'ebe a kwa, ị ga-amata ezigbo onye ị bụ - ahụ onwe gị n'ime ahụ-na otu ị ga - esi mebie hypnotic na - eme ka uche na echiche gị gbanwee gị kemgbe ị bụ nwata. Ị ga-ejide, site n'echiche nke echiche nke gị, ihe mere mmadụ ji nọrọ n'ọchịchịrị banyere mmalite ya na njedebe kasịnụ. Ná mmalite nke ndụ nke ahụ ọhụrụ na-eto eto, onye maara onwe ya na-amalite ime mgbanwe uche n'echiche, mmetụta, na ọchịchọ. N'ịbụ onye uche ya na-emetụta, ọ na-eji nwayọọ nwayọọ chọpụta onwe ya kpam kpam na ahụ ya ma tụfuo aka na ezi njirimara, ebighi ebi. Onye na-anwụ anwụ na-anwụ anwụ, kwenyesiri ike na ọ ga-anwụ, na-ejikarị ohere ya chọpụta ebe kwesịrị ekwesị na Cosmos ma ghara imezu nzube ya. Nwoke na Nwanyi na Nwa egosi otu esi eji ohere a maka nchọpụta onwe onye!
Gụọ nwoke na nwanyị na nwa
"Nkwupụta ndị a adịghị adabere na olileanya obi ụtọ. Ihe akaebe, usoro ihe omumu, ihe omumu na nke uche bu nke enyere n'ime ya, nke i nwere ike, ma oburu na I choro, nyocha, chebara ma kpee ikpe; ma, mee ihe i chere kachasị mma. " HW Percival